Ihe mgbakwasị ụkwụ: Ihe mere eji eme ka ndị agha na-awakpo nke a ma ọ bụ na weebụsaịtị ahụ
Ọ bụ ekpere nke onye ọ bụla nwere ebe nrụọrụ weebụ iji ghara ịdaba n'aka cyberomempụ dị ka hackers. Uwa zuru ụwa dum juputara na ọtụtụ akụkọ ụfọdụ n'ime ha bụ ndị ziri ezi ma ha enweghị ezi ebumnobi.Ihe ọ bụla metụtara ịntanetị bụ banyere SEO na otu esi enwe ọganihu n'ịntanetị. Nchebe nke mkpokọta weebụ abughi nchegbu isi mgbe ị na-eme weebụsaịtị.Ndị mmadụ na-agbalịrị ịmepụta saịtị na njedebe njedebe ma ọ bụ ihe mgbaru ọsọ nke weebụsaịtị - ejectors and eductors pumps. Ihe ha na-amaghị bụ na ndị omempụ na-emefuehi ụra n'ehihie na-agbalị ịzụlite ọrụ na usoro, nke nwere ike ime ka ọrụ ha ka mma. Ụfọdụ n'ime mbanye anataghị ikike ọgụ, nke hackers na-eji na haoge nchọgharị dum na-adabere na ngwá ọrụ ndị ọhụrụ na ndị na-abịa, nke na-eme ka ọnụọgụ azụmahịa zuru oke.
Iji nọrọ n'ebe ndị omempụ na-apụ, ị nwere ike mkpa ịmụta ihe mbụ mere ndị a hackers mbanye anataghị ikikeweebụsaịtị. Nke a bụ ndepụta nke Max Bell, nke Ọkachamara Onye Nlekọta Ihe Nlekọta Ndị Ahịa, nke na-enye ìhè ọhụrụ banyere ihe mere n'azụ onye ọ bụla na -
Ịsọ asọ na-adịghị mma n'ahịa e-azụmahịa maara, karịsịa mgbe ndị na-egwu egwu egwu egwuọrụ. Ndị a nwere ike ịzụta listi email site na ebe nrụọrụ weebụ onye asọmpi ma jiri ya weghaara ndị ahịa. Na ndị ọzọikpe, ha nwere ike iweda saịtị dị ka ebe DDoS, ebe nnukwu botnets wakpo ihe nkesa na ọtụtụ nde arịrịọ n'otu oge. Ndị andị na-agba ọsọ nwere ike ịchọta ụgwọ iji wepụ ihe ndị ha na-eme na-akpata oke nfu.
2. Ego Nzuzo.
Ọghọm Cyber ​​na-enweta mmanụ si na hacking.internet sitere n'akụkọ ego ụlọ akụ na ego ndị ọzọ dịka PayPal. N'ọnọdụ ndị ọzọ, ndị omempụ nwere ike iji SQL ogwu ogbugba n'ime mmadụabanye ma na-enyefe ego dị ka a ga-asị na ha bụ ezigbo ihe odide. Ndị ọzọ hackers nwere ike gbaziri mgbazinye ego site na iji ozi nkeonwe.
3. Ozi mkpọtụrụ ụkwụ.
Ndị na-agba ọsọ na-enweta ọtụtụ ozi nke onye. Ndị na-egwu Cyber ​​nwere ike iji ozi aime ka onye ahuru egwu. Ndị ọzọ nwere ike ime mmejọ site na iji akaụntụ hacked, naanị iji nyefee nsogbu ahụ na-enweghị atụonye. N'ọnọdụ ndị ọzọ, ozi nkeonwe dị ka kaadị njirimara, SSN na ịnya ụgbọ ala nwere ike ịbụ ihe ahịa n'ime ụgbụ. Ịmara ohina ndị ọzọ na-emekarị aghụghọ na-adabere na akaụntụ ndị a. Ndị ọrụ kwesịrị ịkpachara anya maka ụdị ndị a.
4. Gbanyụọ udo.
Ụfọdụ ndị omempụ nwere ike ọ gaghị achọ izuru ohi onye egwu. Otú ọ dị,ha na-emebi ala nke nchedo weebụ ma nwee ike ime ka ebe nrụọrụ weebụ gị nweta ọkọlọtọ ọkọlọtọ Google. Ebe nrụọrụ weebụ dị otú ahụ nwere nsogbu na ogo,na usoro dum nwere ike ime ka mgbalị SEO daa.
E nwere ọtụtụ ihe mere ị ga-eji nwee ike ịbanye ebe nrụọrụ weebụ gị.Intanet niile jupụtara na ndị omempụ cyber ndị na-eburu ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ nakwa nchekwa nchekwa. Ahụmahụ internet zuru ezunke ọtụtụ ndị nwere zutere na hackers bụ nnọọ jọgburu onwe ya. Dịka ọmụmaatụ, ndị na-agba ọsọ nwere ike ime ka mmadụ mara ndụ nke a ma amasite na ụfọdụ foto, nke ha nwere ike weghara na ịntanetị. Ụfọdụ ihe mere hackers nwere ike mbanye anataghị ikike gị na ebe nrụọrụ weebụ dị na nduzi a. Ị nwere ikemụta ụfọdụ n'ime ha ma welie nchekwa nke ebe nrụọrụ weebụ e-azụmahịa gị megide ndị na-agba ọsọ.